संखुवासभा, कोशी राजमार्ग जोगवनी—किमाथाङ्का सडकखण्डको भिर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । - dsnews
संखुवासभा, कोशी राजमार्ग जोगवनी—किमाथाङ्का सडकखण्डको भिर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ ।
जोगवनी–किमाथाङ्का सडक सेनालाई दिने तयारी
संखुवासभा, कोशी राजमार्ग जोगवनी—किमाथाङ्का सडकखण्डको भिर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय लिंक रोडको रुपमा निर्माणाधिन जोगवनी—किमाथाङ्का सडकखण्डको भिर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेना दिने अन्तिम तयारी भएको उत्तर–दक्षिण (कोशी सडक) आयोजनाले जनाएको छ ।
चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो यो सडकको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि ठूला चट्टान रहेको भिर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको हो । त्यस क्षेत्रमा ठूला–ठूला चट्टान भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
अब किमाथाङ्का नाका जोडिन २३ किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । त्यही २३ किमी भित्र नै ठूला चट्टान १५ किमी क्षेत्र भेटिएकाले सो क्षेत्र चाँही नेपाली सेनालाई दिने तयारीमा रहेको छ।
आयोजना प्रमुख पशुपति ज्ञवालीका अनुसार ‘शंखे र महभिरमा कडा चट्टान भएका कारण ट्रयाक खोल्न नै समस्या भएकाले विष्फोटक प्रदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सेनालाई दिन लागिएको हो ।’
राष्ट्रिय गौरवको यस जोगवनी—किमाथाङ्का राजमार्गको छिमेकी तिब्बतको सिमाना किमाथाङ्का नाकामा जसरी पनि यस बर्ष गाडी पु¥याउने उद्धेश्य रहेकाले जटिल खण्डको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले बताए ।
‘विस्फोटक पदार्थ खरिद गरेर बंकर निर्माण गरी भण्डारण गर्ने र भिरको चट्टान फुटाउने प्रक्रियाको लागि नेपाली सेनासँग कुरा भएको र सो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ सांसद गौतमले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनालाई दिनुको विकल्प समेत छैन ।’ यसै आर्थिक वर्षभित्र खाँदबारी–किमाथाङ्कामा गाडी गुडाउने योजना लिएर अघि बढाई, बजेटको व्यवस्था गरेर सडक जोड्ने योजना रहेको सांसद गौतमको भनाई छ ।
सडक निर्माणको क्रममा यसअघि केही समस्याहरु देखापरे पनि अहिले समाधान भइसकेको आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार, चेपुवा, छुमसुर, घोङगोप्पा सडकखण्ड निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ आवश्यक परेको हो ।
सिम्बुङ–हटिया खण्डको ट्रयाक खोल्ने, बरुण–सिम्बुङको रेखाङ्कन विवाद, अलैंची तथा गुम्बा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणको काम अघि बढिसकेको ज्ञवालीले बताए।
यता चेपुवा—हटिया–हुङहुङ हुदै सडक ट्रयाक खोल्नका लागि हेलिकप्टरबाट डोजर लगेर काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय सरकारबाट ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आएको आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
जोगवनी–मोरङ्गको रानी हुदै जोगवनी देखी संखुवासभाको किमाथाङ्का नाका जोड्न कुल ३ सय ९० किलोमिटर रहेको छ । खाँदबारी–किमाथाङकाको दुरी १ सय ६२ कि.मी. रहेको छ । त्यसमध्ये १ सय ४४ कि.मी. सडकको ट्रयाक ओपन भईसकेको छ ।
Previous कोरियाली कम्पनि अब नेपालमै १२ लाखमा ४ कोठे आकर्षक घर बनाउने, सबैको जानकारीको लागी सेयर गरौं
Next सुन्तलाबारी भित्र होमस्टेसहितको बस्ती